UV isibane iintsholongwane
Zininzi izinto ezichaphazela ifuthe le-ultraviolet disinfection kunye ne-sterization.
Izinto ezichaphazela ifuthe le-ultraviolet disinfection kunye ne-sterilization zezi:
(1) Ixesha lokusetyenziswa kwesibane: Amandla okuzala kwesibane se-UV ancipha ngokwanda kwexesha lokusetyenziswa. Ngokubanzi, amandla okuphuma kwesibane se-UV emva kokusetyenziswa kwe-100h ligunya lokulinganisa elilinganisiweyo, kunye nexesha lokukhanyisa xa isibane se-UV sivuliwe kwi-70% yamandla alinganisiweyo bubomi obuqhelekileyo. Umndilili wobomi bezibane zasekhaya ze-UV ngokubanzi malunga ne-2000h.
(2) Iimeko zokusingqongileyo: Ngokubanzi, isibane se-UV sineyona nto ifanelekileyo yokubulala xa ubushushu be-20 ℃ kunye nokufuma okungama-40 ~ 60%. Xa amaqondo obushushu eyi-0 ℃, ukusebenza kwawo kwenzalo kungaphantsi kwe-60%.
(3) Umgama we-Irradiation: ngaphakathi kwe-500mm ukusuka kumbindi wombhobho, ukunyanzeliswa kwe-irradiation kulungelelaniswe nomgama, kwaye ngaphezulu kwe-500mm, amandla e-irradiation aphantse alingane ngokuthe ngqo kwisikwere somgama.
(4) Intsholongwane: Ngenxa yokwakheka kweembumba ezahlukeneyo kunye neemilo zebhaktiriya, ifuthe lokuvalwa kwemitha ye-ultraviolet kwintsholongwane, oko kukuthi, inqanaba lokuzala, kwahlukile. Ukuba imveliso yamandla okukhanya kunye nexesha le-irradiation kuthathwa njengethamo le-irradiation, xa idosi efunekayo ye-Escherichia coli iyi-1, ithatha malunga no-1 ukuya ku-3 nge-staphylococcus, tubercle bacillus kunye nokunye okunjalo, malunga ne-subtilis kunye ne-spores zayo negwele. Ithatha i-4 ~ 8, kwaye malunga ne-2-50 yokubumba.
(5) Indlela yokufaka: Ireyithi yokungena kwemitha ye-ultraviolet iphantsi, kwaye ichaphazeleka kakhulu yindlela yokukhusela kunye nokufaka. Kwigumbi elicocekileyo lebhayoloji, kukho iindlela ngeendlela zokufaka izibane ezixhonyiweyo, izibane ezisecaleni, kunye nezibane zesilingi, phakathi kwazo apho izibane zesilingi zinesona siphumo sokubulala inzalo.
Ngenxa yokuthintelwa kwe-ultraviolet bactericidal effect kunye nefuthe elonakalisayo emzimbeni womntu onokubangelwa ngexesha lokucoca inzalo, ukusetyenziswa kwezibane ze-ultraviolet ukucoca amagumbi ezicocekileyo zebhayoloji kunqabile ukuba kusetyenziswe, kwaye kuphela ngamagumbi ngamanye okanye amacandelo anje ngamagumbi okunxiba, ukuhlamba impahla amagumbi, njl. Okwangoku, eyona nto isetyenziswa rhoqo kukucoca i-ultraviolet yindlela yokuhambisa inqanaba legesi ngokudibanisa inkqubo ye-HVAC.
Egqithileyo Nzalo kunye nzala
Okulandelayo: Ukubulawa kweentsholongwane
Nzalo kunye nzala
Inkqubo yomoya entsha
Ukujikeleza ulawulo lokwahluka koxinzelelo lwenkqubo yomoya
Ulawulo lobushushu oluzenzekelayo kunye nokufuma
Iyunithi yokuphatha umoya (AHU)
Ifestile yokuGqibela yokuCoca igumbi, Ifestile yegumbi elicocekileyo, Ukucoca iCandelo loMoya oMtsha, Igumbi elicocekileyo, Igumbi lokucoca umoya ococekileyo, Inkqubo yaManzi aBandayo,